မိုးစက်ကျသံလေးများ – Hlataw.com
ရန်ကုန်မြို့၌ ခုနစ်ထွေ တီးဟောက်စ် ဆိုလျင် သားသားနားနားနှင့် အကောင်းဆုံးဆိုင်ဟု လူသိများသည်..။ ပိုင်ရှင်မှာ ဦးမြမောင် နှင့် ဒေါ်သန်း တို့ဖြစ်ပြီး သမီး ချိုမာဆိုသော အပျိုမလေး သာရှိသည်..။ ကလေးစိတ်မကုန်သေးသော အပျိုမလေး မြီးကောင်ပေါက်မလေး အရွယ်ပင်…။ မောင်မောင်မှာ ပွင့်ဆိုတဲ့ အစ်မတစ်ယောက်ရဲ့ ဆက်သွယ်ပေးမှုကြောင့် ထိုဆိုင်တွင် ကတ်ရှာ ဟုခေါ်သော ငွေသိမ်းကောင်တာ ထိုင်ရသော အလုပ်ကို ရရှိသည်..။ ဆိုင်အိပ်ဆိုင်စား နှင့် မပူမပင် နေရ၏..။ မောင်မောင်က အပြောအဆို မွန်ရည် ပြေပြစ်မှု ၊ အနေအထိုင် သိမ်မွေ့နူးညံ့မှု ၊ သစ္စာရှိမှု တို့ကြောင့် သူ့အလုပ်ရှင်က ချစ်ခင်သနားကြသည်..။ မိသားစုပမာ ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်ကြသည်..။ ချိုမာလေးမှာလည်း တစ်ကောင်ကြွက်မို့ မောင်မောင်အား အစ်ကိုရင်းတစ်ယောက်ပမာ ချစ်ခင်၏..။ နွဲ့ဆိုး ဆိုးတတ်၏..။ ချိုမာစိတ်ကြိုက် မှန်သမျှ မောင်မောင်ကလည်း အလိုလိုက်သည်..။
အဖေအမေများ မအားသောအခါ၌ မောင်မောင်ကပင် ရုပ်ရှင် လိုက်ပို့ရသည်..။ မိဘများကလည်း မောင်မောင်၏ အနေအထိုင်ကို ကြည့်ပြီး စိတ်ချလက်ချ ရှိကြသည်..။ စီးပွားရေးတစ်ဖက်နှင့် မအားလပ်ခြင်းကသာ များ၇ာ တစ်ဦးတည်းသော သမီးမို့ အလိုလိုက် အကြိုက်ဆောင် စရာများကို သူတို့ကိုယ်စား မောင်မောင်ကပင် ဆောင်ရွက်ပေးနေရသည်..။ ယခုနှစ်မှာ – တန်းဝင်ဖြေရမည်မို့ သူမ မသိသော စာများအား ကျူရှင် မတက်စေပဲ မောင်မောင်ကပင် သင်ပြပေးနေသည်..။ တခါတရံ ထွေရာလေးပါး စကားစမြည်တို့ ပြောကြား ကြလေ့ ရှိသည်..။ တခါတလေ သူမ သိမြင်သည့် အကြောင်းအရာများကို မေးသင့်သည် မမေးသင့်သည် မတွက်ပဲ မောင်မောင်အား သိချင်တာ မှန်သမျှ မေးမြန်းရာ ဖြေရခက်သည့် မေးခွန်းများ ဖြစ်နေတတ်သည်..။ တခါက နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ကား ကြည့်ပြီး အပြန် မင်းသားက မင်းသမီး နှင့် နှုတ်ခမ်းချင်း နမ်းစုပ်ခြင်းကို ….။
ကိုမောင် ..အဲဒါ ဘာလုပ်ကြတာလဲ ဟင်..သူတို့မို့ မရွံတယ်နော်..ဘာများ ကောင်းမှန်းလဲ မသိဘူး..ကိုမောင်ရော သိလား ဟင်…. ဟာ…ဒီကောင်မလေး ပေါက်တတ်ကရတွေ …နင်နားမလည်ရင် နားမလည်သလိုနေ…လျှောက်မမေးနဲ့….. ဒီက..မသိလို့…..ဥစ္စာ…. သူမမေးမြန်းခြင်းကို မောင်မောင်က ကောင်းကောင်းမဖြေလျင်လည်း စိတ်ကောက်တတ်သည်..။ ဂွတော့ ကျသည်..။ လူကြီးစိတ် မဟုတ်သေးတော့ ဒုက္ခတွေတော့ များကုန်ကြလိမ့်မည်…။ ရဲရဲတင်းတင်း ဆက်ဆံမှုမှာ မောင်မောင့်အပေါ် ယုံကြည်ကိုးစားမှုကြောင့်လည်း ဖြစ်တန်ရာသည်..။ သည်လိုဖြင့် နေလာခဲ့ရာ ရက်တို့လည်း တရွေ့ရွေ့နှင့် ကုန်ဆုံးလာကြသည်..။ ချိုမာမှာ တစ်နေ့တခြား မိန်းမကြီး သဏ္ဍာန်များ ပုံပေါ်လာ၍ နို့လေးများမှာလည်း ကလေး လက်သီးဆုပ်သာသာခန့် ရှိလာပြီ..။ တင်သားလေးများမှာလည်း နိမ့်တုံမြင့်တုံ တစ်တစ်ရစ်ရစ် ချစ်စရာလေး ဖြစ်လာသည်..။
ချိုမာသည် ခန္ဓကိုယ် ပြောင်းလဲမှု ရှိလာသော်လည်း မောင်မောင့်အပေါ် ဆက်ဆံရာတွင်မူ ပြောင်းလဲမှု မရှိပဲ ခါတိုင်းလို ပူးပူးကပ်ကပ် ပွတ်သီးပွတ်သပ် နေတတ်သည်..။ သူမအဖို့ မည်သို့မျှ မထူးခြားသော်လည်း မောင်မောင်၏ စိတ်တွေမှာ မသိမသာ တုန်လှုပ် ဖောက်ပြန်လာနေသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်..။ တခါတရံ ဒီကောင်မလေး …ငါ့များ ဟိုဒင်းဖြစ်နေရော့လား…ဟု အောက်မေ့မိသည်..။ ထိုအခါများတွင် မောင်မောင့် အကြည့်များက စူးစူးရဲရဲ နိုင်လှပေရာ…. ကိုမောင်သူများကို ဘာလို့…အဲ့လိုကြီး စိုက်ကြည့်နေတာလဲ….. လှလို့..ပေါ့…. ဟင်း…နော်..ဒါပဲ….. ထိုအခါများတွင် ချိုမာမှာ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းနှင့် ချစ်စရာဟန်ကလေးဖြစ်ကာ ပိုကြည့်ကောင်းနေသည်..။ တကယ်ပြောတာ ချိုမာရဲ့ ..၊ ချိုမာလှတာက လက်လေးတွေက အစလှတာ… ဟု ပြောပြောဆိုဆို ကိုင်ကြည့်သည်..။ မနူးမနပ် အရွယ်လေးများအား သည်လိုပဲ စ၍ ပျိုးထောင်ကြမှန်း မောင်မောင် နားလည်သဖြင့် လက်တွေ့ ကျင့်ကြည့်နေသည်..။
အဆစ်အမြစ်…ပြေပြစ်လွန်းလှ၇ကား ဖယောင်းတိုင်သား ကျနေအောင် ချောမွတ်နူးညံ့လှသည်….။ ပယ်ပယ်နယ်နယ် ကိုင်တွယ်စမ်းသပ်နေသော မောင်မောင်အား ချိုမာသည် မျက်နက်ကလေး ကလယ်ကလယ်နှင့် ကြည့်နေသည်..။ နေပါအုံး…ကိုမောင်က ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ လက္ခဏာ ကြည့်တတ်လို့လား..၊ ဟောတတ်ရင် ဟောပေးစမ်းပါ…. ဟောတတ်တာပေါ့…ချိုမာ..လက္ခဏာက ကောင်းပါတယ်..၊ ဒီတစ်သက်တော့ မဆင်းရဲတော့ဘူး… စသည်ဖြင့် ဘာညာကွိကွ တွေ ပြောပြီး… ဒါနဲ့…ချိုမာ ရင်ဘတ်မှာ မှဲ့မရှိဘူးလား…. မသိဘူး….ကိုမောင်ရဲ့…. ရှိရင် အဲဒါ မိန်းမမြတ်လို့ ခေါ်တယ်…၊ ချမ်းသာတတ်တယ်..၊ ဒီလို ဒီလို နေရာတွေမှာလေ…သေသေချာချာ ..ရှာကြည့်ပါအုံး… ပြောပြောဆိုဆို မောင်မောင့် လက်ညှိုးကြီးများက ချိုမာ၏ ရင်သားနားတဝိုက် ထောက်ပြနေရာ…ချိုမာမှာ ရင်တုံပန်းတုံ ဖြစ်နေရသည်..။ နေအုံးနော်…ကိုမောင်..ချိုမာ သွားကြည့်အုံးမယ်…. ဟုပြောကာ အခန်းထဲသို့ ဝင်သွားသည်..။
မတွေ့ဘူး….ကိုမောင်ရဲ့….. တွေ့မှာပါ…သေချာ ရှာကြည့်ပါအုံး…တကယ်ပါတယ်နော်….. ဟု ပြောဆိုရင်း မောင်မောင်သည် အခန်းထဲသို့ ဝင်လိုက်သွားရာ အပေါ်အင်္ကျီ ကျယ်သီးများကို ဖြုတ်၍ ဘရာစီယာအတွင်းမှ နို့ကလေးနှစ်လုံးကြားမှာ သေသေချာချာ ရှာနေသည်..။ တွေ့လား….. အမေ့…လန့်လိုက်တာ ကိုမောင်ကလည်း….ဘာမှန်းလဲ မသိဘူး….. ကိုမောင် က စေတနာနဲ့ ရှာပေးမလို့…. ဟုပြောကာ ချုိုမာ၏ ရင်သားနှစ်မွှာကြား၌ လက်နှင့် ဟိုဒီ လျှောက်ကြည့်နေသည်..။ ချိုမာမှာ မှင်သက်မိနေသည်..။ ဖယောင်းသည် မီးနှင့် ဝေးနေပါက ကိစ္စမရှိ..။ မီးနှင့် နီးစပ်ပါက ဖယောင်းမှာ အရည်ပျော်ရသကဲ့သို့ ချိုမာမှာလည်း ရင်တထိတ်ထိတ် ခုန်ကာ သာယာမိသလိုလို ရှိလာသည်..။ အေးဟ..မတွေ့ဘူး..၊ အော်….ဒါနဲ့ တူတယ်…. ဟု ပြောကာ ချိုမာ့ နို့သီးလေးကို ဆတ်ခနဲ ဆွဲလိုက်သည်..။ ချိုမာမှာ အသက်ရှူများမှားကာ ပါးစပ်ကလေး ဟ၍ ကြက်သီးမွှေးညှင်းများပင် ထသွားရှာသည်..။
တော်ပြီ…တော်ပြီ…မရှာချင်တော့ဘူး… ချိုမာ့ သဘောပဲလေ…ငါ့ညီမက ကနေ့မှ ပိုလှနေတာ…ဟောဒီပါးကလေးက ဖောင်းဖောင်းမို့မို့နဲ့ တကယ် ချစ်စရာကောင်းတာ…. ဟု ပြောပြီး သူ့နှာခေါင်းကြီးနဲ့ တအားကုန် ဖက်နမ်းလိုက်ရာ…။ ဒါ…ဘာလုပ်တာလည်း…အမေ့ကို တိုင်ပြောမှာ…. ဟောဗျာ….ကိုယ့်ညီမမို့ ချစ်လို့ နမ်းတာပဲ..ဥစ္စာ.. အို……မရဘူး…မရဘူး တိုင်မှာပဲ…. ဟုပြောကာ အခန်းထဲမှ ထွက်သွားသည်..။ မောင်မောင်မှာ တဟေ့ဟေ့နှင့် နောက်မှ မမှီမကမ်း လိုက်ဆွဲသော်လည်း မမိလိုက်ချေ…။ သို့သော် လှေကားထိပ်မှနေ၍ မောင်မောင့်ဘက်သို့ ပြန်လှည့်ကာ လျှာကလေး ထုတ်ပြောင်ပြသွားသည်..။ ထိုအခါမှ မောင်မောင်မှာ သက်မချနိုင်တော့သည်..။ လူမှာအတွေ့ ဆိုသကဲ့သို့ ချိုမာ မှာလည်း အတွေ့ကို မသာယာ မကြည်နူးပဲ မနေနိုင်ချေ…။ နောက်တစ်နေ့၌ စာပြပေးသောအခါ မောင်မောင်မှာ စားပွဲအောက်ကနေ၍ ခြေထောက်ချင်း ထိလိုက်။
ချိုမာက ရုန်းကန်ပြလိုက်နှင့် တခါတရံ ချိုမာ့ ပေါင်တစ်လုံးအား သူ့ပေါင်နှစ်ချောင်းနှင့် ညှပ်၍ ထားရာ ချိုမာမှာ မောင်မောင့်လက်ကို ဆွဲဆိတ်လိုက်နှင့် အတွေ့အထိတွင် သာယာနေတော့သည်..။ စာဆိုတာ ဘာမှန်း မသိကြတော့..။ မနူးမနပ်ကလေးအား ချော့မြှူရန် အတွက် မောင်မောင်မှာ အကြံထုတ်ရလေပြီ..။ အော်…ချိုမာ..ဟိုတစ်ခါတုန်းက ရုပ်ရှင် အပြန်မှာ ကိုမောင့်ကို မေးတာ ခုဖြေပြမယ်လေ.. ဘာ….လဲ..ဟင်… မင်းသားနဲ့ မင်းသမီး နှုတ်ခမ်းချင်း စုပ်တာ သိချင်တယ်ဆို..အဲဒါ…ချိုမာ မျက်လုံးလေး မှိတ်ထား…ခေါင်းကလေးကို မော့ပြီး..နှုတ်ခမ်းကို အသာလေး စုထား..ပေး… ချိုမာမှာ မောင်မောင်ပြောသမျှ လိုက်လုပ်ပေးရှာသည်..။ ကြောင်ဘားကြီး မောင်မောင်က ချိုမာ့ကို လှမ်းဖက်၍ နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာအား နမ်းစုပ်လိုက်ရာ ချိုမာမှာ ရုန်းကန်ရှာသော်လည်း အင်အားချင်းမမျှသဖြင့် မရုန်းနိုင်ရှာ..၊ တဟင့်ဟင့်နှင့် ငြီးညူသံပြုရင်း မောင်မောင့်ရင်ခွင်ထဲမှာ ငြိမ်ကျသွားရှာသည်..။
ကိုမောင် သိပ်ဉာဏ်များတာပဲ…. ဘာမှန်းလဲ မသိဘူး…သူများ အသက်ရှူကြပ်ပြီး မောတာပဲ ရှိတယ်..၊ မကောင်းပါဘူး…..ဒါနဲ့… ပြွတ်ခနဲ မြည်အောင် ဘယ်လို လုပ်တာလဲ…ဟင်… အောက်နှုတ်ခမ်းကို စုပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ချိုမာက ဆတ်ခနဲ ဆွဲဖြုတ်လိုက်..၊ အဲဒီမှာ အသံမြည်တာပဲ..၊ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အပေးအယူ မျှမှ အရသာရှိတာ..၊ စုပ်တဲ့သူက စုပ်သလို အနမ်းခံရတဲ့သူကလဲ သင့်လျော်သလို တုံ့ပြန်မှ …ကိုမောင်က လျှာဖျားနဲ့ ကလိရင် ချိုမာကလဲ လျှာနဲ့ ပြန်ကလိရတယ်… သည်လိုနဲ့ စာသင်ခြင်းမရှိပဲ ထိုနေ့အဖို့ နမ်းစုပ်ခြင်း သင်တန်းနှင့် သာ အချိန်ကုန်ခဲ့ကြရာ ချိုမာ ကိုယ်တိုင်မှာ မောင်မောင့်အပေါ် အတွေ့အထိကို တဏှာဖြင့် တပ်မက်စွဲလန်း နေချေပြီ…။ မောင်မောင်မှာလည်း တစ်ဆင့်ချင်း တက်ရန် ကြံစည်စိတ်ကူးနေသည်..။ ချိုမာကို စာပြရသော အချိန်များ၌ နှစ်ယောက်တည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေ့ကြရသည်.။
စာသင် စာကြည့်ကြခြင်းထက် မောင်မောင့် ရင်ခွင်ထဲ၌ ချိုမာရှိနေရသည်က သာ များသည်..။ လောကကြီးအကြောင်းကို ဘာမှ မသိတော့သော ချိုမာမှာ အတွေ့ရေယာဉ်ကြောမှာ သာယာယစ်မူးနေတော့သည်…။ မောင်မောင်မှာ မကြမ်းကြေ တတ်သိနေသော်လည်း ချိုမာမှာ ကလေးစိတ်သာသာနှင့် လူကြီးကိုယ် လေး ဖြစ်နေသဖြင့် မနူးမနပ်ကလေးအား ထိုကိစ္စ ထိရောက်အောင် အချိန်ရှိသရွေ့ ကြိုစားနေသည်..။ တစ်ည၌ နှစ်ယောက်ထိုင်ခုံပေါ်တွင် မောင်မောင် စာကြည့်နေစဉ် ချိုမာရောက်လာကာ မောင်မောင့် ပေါင်ပေါ် ခေါင်းအုံး၍ စာကြည့်သည်..။ နူးညံ့သော ဆံပင်အထိအတွေ့ကြောင့်များလား မသိ မောင်မောင်၏ လိင်တံကြီးမှာ ထောင်မတ်လာရသည်..။ ချိုမာ့ ခေါင်းကို ဖယ်ရခက် ..သိမှာလည်း စိုးရိမ်မိ..၊ မောင်မောင် မခုန်စဖူး ရင်တွေ ခုန်နေသည်.. အပျိုစစ်စစ်ကလေး၏ အချစ်ဖူးကို ရင်ဆိုင်တွေ့လိုက်ရ ကောင်းလေမလား ဟုတွေးတောနေမိသည်..။
ချိုမာမှာလည်း ရိပ်မိနေသည်.. ဆတ်ခနဲ အလှုပ်မှာ သိသော်လည်း ဆက်အိပ်မြဲ အိပ်နေသည်..။ မောင်မောင် စိတ်မထိန်းနိုင်တော့..။ ချိုမာ့ ပါးကို ဘယ်ပြန်ညာပြန် နမ်းရှုံ့ပစ်ပြီး ၊သန္တာရောင် နှုတ်ခမ်းကလေးကို တအားကုန် စုပ်နမ်းပြီး ချိုမာကလည်း မောင်မောင် သင်ထားသည့်အတိုင်း တုံ့ပြန်..အနမ်းများ ကောင်းကောင်းပေးတတ်နေပြီ….။ ပြွတ်ခနဲ နေအောင် နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကို ခွာလိုက်..၊ ဖတ်ခနဲ ပြန်ပြီး နမ်းစုပ်လိုက်နဲ့ အမျိုးမျိုး တုံ့ပြန်မှုလေးတွေ ပေးတတ်နေပြီ..။ ချိုမာ့ ဆံစဖျားလေးတွေ လည်ပင်းသားနုနုလေးတွေကို နှာခေါင်းကြီးက ထိတွေ့နေလေပြီ..။ အို…အို…..ကိုမောင် ယားတယ်..မလုပ်ပါနဲ့….တော်ပါတော့ ဆိုနေမှ…၊ …အို…ကြည့်ပါလား.လို့…ဘာလို့ သူများ ကျယ်သီးတွေ..ဖြုတ်နေရတာလဲ…. ချိုမာကလဲကွာ..ကိုမောင့်ကို ချစ်တယ်ဆို…၊ ဒါလေးတော့ ခွင့်ပြုပါနော်…ဘာမှဖြစ်တာမှ မှုတ်ပဲ…ချိုမာ့ နို့လေးတွေကို ကိုင်ကြည့်ရုံတင် နော်…….နော်… တအိုအို တအင်အင်နှင့် ငြီးငြူငြင်းဆန်နေရသော်လည်း။
မောင်မောင် သနားမှ ချမ်းသာရာ ရမည့် ချိုမာ့ဘဝ…။ ခုကြည့်လေ မောင်မောင့် လက်ကြမ်းကြီးဟာ ချိုမာရဲ့ နူးညံ့တဲ့ နို့ကလေးကို ဆုပ်ကိုင်နေပါပြီ..။ အဦးအထွတ်မို့ မောင်မောင်မှာ ကြမ်းကြမ်းကြီး မကိုင်ရက်….၊ ဖွဖွလေးသာ ပွတ်သပ်ပေးနေသည်..။ လက်ဘက်ရည်ကြမ်း ပုဂံသာသာမျှ သာရှိသော နို့အုံပေါ်မှ နို့သီးဖျားသေးသေးလေးမှာ တောင်ထနေသည်..။ အတွင်းမှ နို့အုံလေးမှာ မာမာခဲခဲလေးမို့ ချေလိုက်ပါက ချိုမာ နာပြီး လန့်သွားမှာ စိုးရိမ်ရ၏..။ ချိုမာ့အနေနှင့် ခံစားရသည်မှာ တရှိန်းရှိန်း တဖိန်းဖိန်းနှင့် ကောင်းသလိုလို အူယားသလိုလို နှင့် ခံစားရတာ တစ်မျိုးကြီးပါ..။ ဒီလိုအရသာမျိုးကို အစ်ကိုမောင်က ဘာပြုလို့များ စောစောက အသိမပေးတာပါလိမ့်ဟု အပြစ်မြင်မိလေသည်..။ ချိုမာ လက်များမှာ မောင်မောင့် လက်ဖျံကို ဆုတ်ကိုင်ပြီး တွန်းဖယ် မပစ်ရက်နိုင်ပဲ ရင်ကို ကော့ကော့ပေးနေမိသည်..။ သူမက ကော့ပေးတော့ မောင်မောင့်လီးကြီးနှင့် ချိုမာ့ ခေါင်းနှင့် ထိမိနေသည်..။
ချိုမာ့စိတ်ထဲမှာ မရိုးမရွနှင့် ကိုင်ကြည့်ချင်သည်..။ မောင်မောင်က လက်မနှင့် လက်ညှိုးကြားမှာ နို့သီးဖျားလေးကို ချေပေးလိုက် လက်ဝါးပြင်နှင့် ကလိပေးနေသလို နှာခေါင်းကြီးမှာလည်း ချိုမာ့ ပါးပြင်နှင့် လည်တိုင် ဆံစပ်လေးတွေပေါ်မှာ သောင်းကြမ်းနေသည်..။ အိုး….ကိုမောင် သိပ်ကဲတာပဲ…. ဘာဖြစ်လို့လဲ ချိုမာရဲ့….မကောင်းလို့လား…. မသိဘူး….ချိုမာ ရှက်ပါတယ်… ဘာမှ မမေးပါနဲ့… သတိတရားဆောင်ပြီး အတွေ့နောက် မလိုက်မိအောင် ဟန်ဆောင်သော်ငြားလည်း သာယာမှုက မျက်နက်ကလေးကို မှေးမှိတ်သွားစေသည်..။ မောင်မောင်သည် ချိုလုံးလေးကို ဘရာစီယာအတွင်းမှ အသာမတင်ပြီး လက်နှင့် ပွတ်သပ်ပေးရာမှ တဖန် ပါးစပ်နှင့် စို့ပေးလိုက်သည်..။ ဒီအတွေ့ကိုတော့ ချိုမာ ဟန်မဆောင်နိုင်ပါ..။ ကိုမောင်ကလဲ…..ခလေးလေး ကျနေတာပဲ…ဘာလုပ်မှန်း မသိပါဘူး…ယားတယ်..၊ တော်ပါတော့ ကိုမောင်ရယ်…သူများ မနေတတ်တော့လို့ပါ..နော်…လို့… ပါးစပ်က တောင်းပန်နေသော်လည်း။
လက်နှစ်ဖက်မှာ မောင်မောင့် လည်ပင်းကို ဖက်လျက် နှင့် ရင်ကလေး ကော့ကော့တက်နေပုံမှာ မောင်မောင့်စိတ်ဆင်ရိုင်းကို ပို၍ အားပေးသလို ဖြစ်နေသည်..။ ကော့တက်နေသော ချိုမာ့ အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးကို လက်နှင့် လှမ်းအုပ်ကိုင်လိုက်ရာ တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးသော အဖြစ်မို့ စိတ်လာ၍ ဖောင်းထနေသော အဖုတ်ကလေးကို ကိုင်ထိထားသဖြင့် ရှက်သွားသည်..။ ထို့ကြောင့် မောင်မောင် ဘာမှ မလုပ်နိုင်ခင်မှာပင် ထ၍ …. တော်ပြီ….တော်ပြီ…..ကိုမောင် ကဲလာပြီ….အဲဒါတော့ မကိုင်ပါနဲ့…သူများ ကြောက်လို့ပါနော်….. ဟုပြောကာ ထွက်ပြေးသွားသည်…။ မောင်မောင်မှာ ဖီလင်တွေ အရမ်းတက်နေရပြီးမှ ခုလိုဖြစ်သွားရာ ဆတ်တငံ့ငံ့ကြီးဖြစ်နေသည်…။ ကိစ္စမရှိ…ဒီအဆင့်ထိအောင်မြင်လာမှတော့ ကျန်သောအဆင့်သည် မခဲယဉ်းတော့..။ကိုမောင် တော်တော့နော်…..နေ့တိုင်းကြီး စို့နေတော့ သူများနို့တွေ ကြီးလာပြီ…၊ ကြီးတာမှ နှစ်ဖက်မျှ ကြီးတာမှုတ်ဖူး.ကိုမောင်စို့နေတဲ့ ဘယ်ဘက်က ပိုကြီးနေတာ….။
ဘယ်နှရက်များ ရှိသေးလို့လဲ..ချိုမာရဲ့….. ခြောက် ရက်ရှိပြီနော်….နေ့တိုင်းပဲ..၊ ခု ဘရာစီယာတွေ မတော်တော့ဘူး….ကိုမောင် ဝယ်ပေး….. ဝယ်ပေးမှာပေါ့…ကနေ့စို့ပြီး တော်ပြီနော်…၊ ဒါပေမယ့် ချိုမာ့ဟာတော့ ကိုင်ကြည့်မှာနော်…. ကိုင်ရုံတင် ကိုင်နော်…. စိတ်ချပါ….. သူ့အလိုချည်း လိုက်နေရတာပဲ…. သိဘူး……ရော့ရော့….စို့တော်မူပါ..ရှင့်… သူမကိုယ်တိုင် ကပင်မောင်မောင်ကို ချိုလှန်တိုက်သောအဆင့်ထိ ရောက်ရှိနေပေပြီ…။ ချစ်သူနှင့် တွေ့ရလေတိုင်း မိန်းမတွေ၏ အရှက်တရားသည် ပျောက်ကွယ်ရလေပြီ…။ မောင်မောင်မှာ နို့သီးဖျားကို ငုံစို့လိုက် ၊ လျှာနှင့် ကလိပေးလိုက်နှင့် ကျန်လက်တစ်ဖက်ကလည်း တစ်ဖက်ထဲ ကြီးနေသော နို့နှင့် ညီမျှစေရန် ပွတ်ကိုင်တွယ်ပေးရသည်..။ ချိုမာမှာ မျက်စိကို မှိတ်၍ မောင်မောင့် ဆံပင်တွေကို ဖွ ၊ ခေါင်းကို ဖက်ကာ ဖီလင်တွေ ငြိမ့်နေရသည်..။ နို့ကို ချေနေသော မောင်မောင့်လက်မှာ ချိုမာ၏ အဖုတ်ရှိရာသို့ လှမ်းနေပြီ…။
ချိုမာမှာလည်း ပေါင်ကို မသိမသာ ကားပေးနေသည်..။ ပေါင်ရင်းသားများကို ပွတ်ပြီး အဖုတ်ကို ပွတ်သပ်ဆုပ်နယ်ပေးရာ ချိုမာမှာ မောင်မောင်၏ ဆံပင်များကို အားမလိုအားမရနှင့် ဆုပ်ချေ ဆွဲဖွနေသည်..။ ထမီအပေါ်မှ ပွတ်နေရာက မောင်မောင်က တဆင့်တက်၍ ထမီကို လှန်ကာ တိုက်ရိုက် ကိုင်တွယ်လေပြီ…။ ပထမဆုံးအကြိမ် လက်နှင့် တိုက်ရိုက် ကိုင်ခြင်းဖြစ်သည်…။ မောင်မောင် ဖျားသွားသည်..။ အမွှေးဆိုလို့ တစ်ပင်မျှမရှိသေးသော ဟင်းလင်းပြင်လေး…။ ဖောင်းဖောင်းမို့မို့ စောက်ဖုတ်ကလေး၏ အက်ကြောင်းကလေးကို အသာဖြဲ၍ စမ်းကြည့်လိုက်သောအခါ အရည်များ စိုရွှဲနေသည်..။ မည်မျှအထိ စိတ်ပါနေသည် မသိ..။ အရည်ကြည်များ တော်တော်ကို စိုနေသည်..။ မောင်မောင်မှာ အစေ့လေးကို မထိတထိ ကလိရင်း လက်ခလယ်နှင့် အက်ကြောင်းလေးအတိုင်း ပွတ်ဆွဲနေသည်..။ ပထမဦးဆုံး လက်ခလယ်နှင့် လမ်းဖောက်ထားမှ…..။
ဗျစ်.. ဟူသောအသံနှင့်အတူ ချိုမာ၏ မျက်နှာ ရှုံ့ရှုံ့မဲ့မဲ့ ဖြစ်သွားသည်..။ သို့သော် အံကိုကြိတ်၍ ပေါင်ကလေးများ ကားပေးလာသည်..။ မောင်မောင်မှာ တင်းနေအောင် ဆွဲထားသော ရာဘာပြားကို လက်နှင့် ထိုးဖောက်သကဲ့သို့ ခံစားလိုက်ရသည်..။ တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကလေး ခံစားလိုက်ရသည့်နည်းတူ သာသာကလေး မွှေပေးနေသည်..။ ချိုမာမှာ လိမ်တွန့်နေရင်းမှ မောင်မောင်၏ လက်ဖျံကို သူမ၏ ပေါင်နှစ်ချောင်းနှင့် တင်းကြပ်စွာ ရစ်ပတ်စပြုလာသည်..။ မောင်မောင့်လက်ကြီးများ လွတ်ထွက်သွားမည့်အလား စိုးရွံ့ကာနေသည်..။ အို….ကိုမောင်ကလဲ ..သိပ်ဆိုးတာပဲ…၊ တော်တော့နော် ချိုမာ့အဖုတ်ထဲက ပူလာပြီ..၊ ကြောက်လဲ ကြောက်လာပြီနော်…နော် လို့…. ကြောက်တာလား ကောင်းတာလား မှန်မှန်ပြော….နော်…. ဘာတွေ မေးမှန်းလဲမသိဘူး…၊ တော်ပါတော့ ကိုမောင်ရယ်…ချိုမာမနေတတ်လွန်းလို့ပါ.. တောင်းပန်ပါတယ်… ဒါဖြင့် …ကိုမောင့်လီးကို ကိုင်ပေးလေ…. ဟွန်း….သူသိပ်ကဲတာပဲ။
ကိုင်ရုံတင် ကိုင်ပေးမှာနော်…ဒီထက် အဆင့်မတက်နဲ့…. ချိုမာမှာ မောင်မောင့်လုံချည် ပေါ်မှပင် ထောင်မတ်နေသော လိင်တံကြီးအား သူမ၏ ပျော့ပျောင်းသောလက်ချောင်းလေးများနှင့် ဆုပ်ကိုင်ပေးလိုက်သည်..။ ကိုမောင့် လီးကြီးနဲ့များ ခံလိုက်ရရင်တော့ .. ဟူသော အတွေးများ ဝင်လာသည်..။ ကိုမောင့်ဟာကြီးက ပူနွေးနွေးကြီးနော်… နဲတာကြီး….မှုတ်ဘူး… ချိုမာရယ် လုံချည်ချွတ်ပြီး ကိုင်ပေးပါလား…၊ ဒါမှ ပိုပြီးကောင်းတာ…ကိုမောင်လဲ ကောင်းတာပဲ… ဟုပြောပြောဆိုဆို မောင်မောင်သည် သူ၏ လုံချည်ကို ချွတ်ပေးလိုက်သည်..။ ချိုမာမှာ တိုက်ရိုက်ကြီးမြင်တွေ့ရတော့မှ မျက်လုံးလေးဝိုင်းသွားရသည်..။ နည်းတာကြီး မဟုတ်ပါ..။ ဒစ်လန်ကြီးနှင့် ထိပ်ဝက အရေများ စို့နေသေးသည်..။ ဒစ်ကြီးမှာ နီတာရဲကြီးနဲ့ ဖြစ်သည်..။ ချိုမာလက်ဖဝါးလေးမှာ အလုပ်ကြမ်းဆိုလို့ တစ်ခါမှ မလုပ်ကိုင်ခဲ့ရ၍ အလွန်နူးညံ့လှသည်..။ အကိုင်ခံရသော မောင်မောင်မှာ လက်ဖဝါးနုနုလေးနှင့် ဒစ်ဖျားကို ထိလိုက်တိုင်း တွန့်တွန့်သွားသည်..။
ကောင်းလိုက်တာ ချိုမာရယ်…ကိုမောင့် ဒစ်ကို ယားလာတာပဲ…. ဟုတ်တယ်နော်…ချိုမာလဲ ယားလာတယ်..၊ ဘယ်နေရာကမှန်း မသိဘူး…. ကိုမောင့်ဟာကို ချိုမာ့ထဲ သွင်းကြည့်ရအောင်နော်….. မလုပ်ပါနဲ့ ကိုမောင်ရယ်…ဒါကြီးများ သွင်းရင် သေလိမ့်မယ်..၊ ခု လက်ချောင်းလေးတောင်မှ သူများ နာလှပြီ.. မောင်မောင်မှာ ပါးစပ်က နော်နော်နှင့် ချော့နေသလို လက်ကလဲ သွက်လှသည်..။ ခဏချင်းပင် ချိုမာမှာ ပေါင်ကားလျက် ထမီကလေးမှာအထက်သို့ လန်တက်နေတော့သည်..။ မောင်မောင်သည် ချိုမာ၏ ပေါင်ကြားထဲသို့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ဝင်ထိုင်သည်..။ ချိုမာမှာ နောက်ပြန် လက်ထောက်လျက် နှင့်ပင်..။ ချိုမာ ကိုယ်တိုင်မှာလည်း လက်တွေ့ နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ ယောက်ျားလိင်တံကြီးကို မြင်ပြီးကိုင်ပြီးမှတော့ စမ်းတော့ ကြည့်ချင်သည်..။ ဖြစ်ပါ့မလား ကိုမောင်ရယ်… တော်တော်ကြာ ဒုက္ခရောက်နေပါ့မယ်… ဖြေးဖြေးချင်းတော့ ဖြစ်လာမှာပေါ့…စိတ်ရှည်ပြီး ချိုမာက သည်းခံနော်။
မတော်လို့ ပြန်လွှတ်လိုက်ရတယ်လို့ ထုံးစံမှ မရှိတာ.. မောင်မောင်မှာ သူ့လိင်တန်ကြီးကို လက်နှင့်ကိုင်၍ ချိုမာ၏ အဖုတ်အက်ကြောင်းလေးတလျောက် အထက်အောက် ပွတ်ပေးနေသည်..။ ချိုမာ၏ မျက်လုံးကလေးများ စင်းလာသလို သူမကိုယ်တိုင်က မောင်မောင်ဘက်သို့ ပို၍ အားမလိုအားမရနှင့် အံကို ကြိတ်ကာ ခေါင်းတခါခါနှင့် ဖြစ်နေသည်..။ မောင်မောင်မှာ အပေါက်ဝကို တွေ့ရသော်လည်း မသွင်းသေးပဲ..၊ လီးထိပ်နှင့်ပင် ကလိပေးနေသေးသည်..။ ချိုမာ၏ အဖုတ်မှာလည်း ရှေ့ပြေးအရည်ကြည်လေးများ ရွှဲရွှဲစိုနေကာ လီးကြီးအား ဝင်ပါတော့ ဝင်ပါတော့ ဟု ပြောနေဘိအလား ဖိတ်ခေါ်နေလေပြီ..။ မောင်မောင်မှာ အပေါက်ဝကို တစ်ချက်တေ့ပြီး အထက်အောက်မွှေရင်း ဒစ်ဖျားမြုပ်ရုံမျှ သာသာဖိသွင်းလိုက်ရာ ချိုမာမှာ အမေ့ ဟု ယောင်အော်ပြီး မောင်မောင့် ရင်ဘတ်ကို တွန်းထားသည်..။ ဒါတောင်မှ မောင်မောင်က လက်နှင့် အပျိုမှေးကို အရင်ဖောက်ထားခဲ့လို့…သာပေါ့..။
နာတယ်…..ကိုမောင်ရယ် တော်ပါတော့နော်..ကျေနပ်ပါတော့…၊ ချိုမာတော့ သွေးတွေထွက်လာပြီ ထင်တာပဲ… ခဏတော့ နာမှာပေါ့ ချိုမာရဲ့..ခုတောင် ဒစ်ကျော်ကျော်ဝင်နေပြီပဲ…၊ ခေါင်းဝင်မှတော့ ကိုယ်ဆန့်ရမှာပေါ့…. မောင်မောင်မှာ အပျိုစစ်စစ် ပူပူနွေးနွေးကလေးအား အခွင့်အရေးရတုန်း လက်လွှတ်မခံချင်ပေ..။ ချိုမာပြောလည်း ပြောစရာပင်…။ မောင်မောင့် လိင်တံမှာ ဒစ်ကျော်ကျော်ဝင်သော်လည်း နောက်တထစ် သွင်းဖို့ရန်မှာ တကယ်မလွယ်လှ..။ လုပ်မယ့်လုပ်တော့ အဆုံးစွန်ထိပဲ ကောင်းပါတယ်ဟု ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ချိုမာ၏ တင်သားနှစ်ဖက်အား ကိုင်ကာ အသာလေး ဖိချလိုက်ရာ ..ဗျစ် ဗြိ ဟူသော အသံနှင့်အတူ…. အမေ့…..နာတယ်….ကိုမောင် တော်ပြီ..ကောင်းလဲ မကောင်းဘူး….. ဟုပြောကာ ချိုမာက မောင်မောင့်ရင်ခွင်ထဲမှ ရုန်းထွက်သွားသည်..။ အဝတ်အစားများကို ကပျာကယာ ဝတ်ရင်းနှင့် ရှစ်ကြီးခိုးပါရဲ့ ဟု ပါးစပ်က ပြောရင်း တောင်းပန်နေသော ချိုမာ့ကို ကြည့်၍ မောင်မောင် သနားသွားသည်..။
နောက်များမှ တဖြေးဖြေးချော့ပြီး လုပ်ရသေးတာပေါ့ ဟု ကြိမ်းရင်း ပြုံးစိစိနှင့် ကြည့်နေသည်..။ ချိုမာသည် မောင်မောင့်ပါးကို နမ်းကာ အောက်သို့ ဆင်းပြေးလေသည်..။ ထိုညက မောင်မောင် တော်တော်နှင့် အိပ်မပျော်..။ ချိုမာမှာလဲ အိပ်ယာထဲရောက်လေခါမှ ပထမဦးဆုံး အကြိမ်မြင်ဖူးတွေ့ဖူးသော အရသာကို စဉ်းစားရင်း တလွန့်လွန့် တလူးလူးဖြစ်နေသည်..။ ကြိတ်မှိတ်ခံရင်တော့ ရကောင်းပါရဲ့ ဟူသော အတွေးနှင့်အတူ ဖီလင်တွေ ပြန်ဝင်နေသည်..။ ချိုမာက သီးသန့် တစ်ခန်းအိပ်ခြင်းဖြစ်သည်..။ မောင်မောင့် အိပ်ယာကို မည်သို့သွားရမလဲဟု စဉ်းစားနေသည်.။ ပြင်ပလောက၌ မိုးသက်လေညှင်းလေး တိုက်ခတ်စ ပြုနေသည်..။ ရန်ကုန်မိုးသည် မထင်မှတ်ပဲနှင့် ရွာတတ်သည်..။ မိုးသက်လေကြောင့် ချိုမာ၏ အခန်းမှ ပြူတင်းပေါက်အခန်းစီး အပြာလေးသည် လူးလွန့်လှုပ်ရှားနေသည်..။ ချိုမာ့ စိတ်တွေလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပင်.. ည၏ တိတ်ဆိတ်ခြင်းကို မိုးခြိမ်းသံက ဖြိုခွင်းလိုက်သည်..။
မောင်မောင်၏ ခြေထောက်ကို တစ်ယောက်က ကိုင်လှုပ်၍ နှိုးနေသည်ကြောင့် မောင်မောင် လန့်နိုးသွားသည်..။ ဘယ်သူလဲ..ဟင်… ချိုမာပါ..ကိုမောင်ရယ်…မိုးတွေ ခြိမ်းတော့ ချိုမာကြောက်လို့ပါ… အော်…..ချိုမာ..ရယ်… ဟု ငြီးတွားရင်း မောင်မောင်ပြုံးလိုက်သည်..။ ခြင်ထောင်ထဲ ဝင်စေပြီး ရင်ခွင်ထဲ၌ ချိုမာကို ဖက်ထားလိုက်သည်..။ ငြိမ်သက်ခြင်းကို အသက်ရှူသံများက ဖုံးလွှမ်းနေသည်..။ သက်ပြင်းချသံ အဝတ်အစားချွတ်နေသံများ လူးလွန့်လှုပ်ရှားသံများသာ ထွက်ပေါ်နေသည်..။ မောင်မောင်နှင့် ချိုမာမှာ အပေါ်အင်္ကျီများ မရှိကြပဲ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် တင်းကြပ်စွာ အငမ်းမရ ဖက်ရမ်း နမ်းစုတ်နေကြသည်..။ ခန္ဓာကိုယ် နှစ်ခုမှာ တဖြေးဖြေးနှင့် အိပ်ယာထက်သို့ လဲကျသွားသည်..။ ချိုမာမှာ နေ့လည်က အရှိန်ကြောင့်လား ၊ ညအမှောင်ကပဲ သူမအရှက်အကြောက်တွေကို ကွယ်ပျောက်သွားစေသလားမသိ တုန့်ပြန်အနမ်းများကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ကလေးပေးနေသည်..။
ပြေလျောကျနေသော ထမီကိုပင် မသိမသာကလေး ချွတ်ပေးနေသည်..။ မောင်မောင်မှာလည်း လုံချည်ကို ကွင်းလုံးချွတ်လိုက်သည်…။ နို့ကလေးများကို ချေမွပွတ်သပ်ပေးနေသလို…အောက်မှ ချိုမာကလည်း လူးလိမ့်ရင်း အားမလိုအားမရတွေ ဖြစ်လာသည်..။ ကြာလိုက်တာ ကိုမောင်ရယ်…ဟု ဖွင့်မပြောရုံတမယ်ပင်…။ မောင်မောင့်မြှူဆွမှုတွေမှာ ချိုမာ အတွက် ရွစိစိ ဖြစ်နေပါပြီ…။ အို့…..ကိုမောင်ရယ်…အင့် ဟင့်အင်း…ကွယ်…. ကိုမောင့် လီးကြီးကို ကိုင်ပေးပါအုံးနော်….. ဘာလုပ်ဖို့များ…ကိုင်စေချင်ရတာလဲ..လို့… ချိုမာ့လက်ကလေးတွေက သိပ်နုတော့ အကိုင်ခံရတာ ကောင်းလွန်းလို့ပါ…. ချိုမာသည် မောင်မောင့်လီးကြီးကို သေသေချာချာ ကျကျနန ကိုင်ပြီး အထက်အောက် ဂွင်းတိုက်သကဲ့သို့ လုပ်ပေးနေသည်..။ နောက်ပြီး သူမကိုယ်တိုင် မနေနိုင် မထိုင်နိုင် ဖြစ်ကာ သူမအပေါက်ဝကို လီးကြီးနှင့် တေ့ပေးလိုက်သည်..။ .အို….အရေတွေမှ ရွှဲလို့ပါလား…..။
ချိုမာ…ပေါင်ကို ကားထားပြီး…ဒူးထောင်ထားနော်…. ဖြေးဖြေးတော့ လုပ်ပါနော်…ကိုမောင် နေ့လည်တုံးက လည်း နာထားတဲ့ ဒဏ်က ၇ှိသေးတယ်… မောင်မောင်က အပေါက်ဝတွင် တေ့နေရာမှ ဖြေးဖြေးချင်း ဖိသွင်းပေးလိုက်ရာ…ဒစ်ကျော်ကျော်မျှ ဝင်သွားသည်..။ ယခုအခါတွင် ချိုမာမှာ ငြီးငြူသံ မပြုတော့ပေ…။ မောင်မောင့် လက်မောင်းသားများအား သူမလက်နှင့် စုံကိုင်ညှစ်ထားသည်..။ သဘောမှာ ကြိတ်မှိတ်ခံနေသည့်ဟန်ပင်…။ နို့နှစ်လုံးအား ကိုင်၍ ချေပေးရင်း ဒစ်ဖျားကို အဝင်အထွက်လုပ်နေသည်..။ မောင်ရယ်…တစ်မျိုးကြီးပဲ…ဘယ်လို လုပ်နေတာလဲ…. ဖြေးဖြေးလေး သွင်းထားတာ ချိုမာရဲ့..၊ ကိုမောင် သွင်းလိုက်မယ်နော်…ချိုမာက အောက်ကနေ အသာလေး ကော့ပေးလိုက်နော်…. လိင်တံမှာ တဝက်ကျော်ကျော် ရောက်သည်အထိ ဝင်သွားရာ ချိုမာ ကော့ကော့ပေးနေရင်းမှ တွန့်သွားသည်..။ အမေ့……အိုး..ကျွတ်ကျွတ်….. ဘာဖြစ်လို့လဲ…ဟင်… နာတယ်……ကိုမောင်ရယ်။
အစတော့..နာတာပေါ့ကွယ်…နောက်တော့လဲ ကောင်းလာမှာပေါ့…. စူထွက်နေသော နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာအား စုပ်ယူလိုက်သည်..။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် လွတ်ထွက်သွားမတတ် ဖက်နေရင်း အပေါ်မှ ဆောင့်ချက်ကိုလည်း မနားပါ…။ မောင်မောင် အားမရချင်တော့…။ လီးကို အဆုံးထိသွင်းရင်း ကပ်ထားလိုက်သည်…။ ချိုမာ မှာ မောင်မောင်က နှုတ်ခမ်းကို စုတ်နမ်းထား၍ အသံထွက်အောင် မအော်နိုင်သော်လည်း မောင်မောင့်တစ်ကိုယ်လုံးကို ပိုမို တင်းကြပ်အောင် ဖက်မိလျက်သား ဖြစ်နေသည်..။ နာလို့လား…ကောင်းလွန်းလို့လားဟု ခွဲခြားရ ခက်လှသည်..။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပုဇွန်ဆိတ်ကလေး ငယ်ငယ် ပေမယ့် ပင်လယ်ကိုတော့ ရောက်အောင် ကူးတော့မည် ဟူသော အဆင့်သို့ ရောက်ပြီ…။ နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကို ခွာပြီး ချိုမာကို မောင်မောင် အတင်းဖက်ထားလိုက်သည်..။ ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ…ကိုမောင်ရယ်…သူ့ဟာကြီးက သူများအဖုတ်လေးထဲမှာ ပြည့်ညှပ်နေတာပဲ…။
ရင်ခေါင်းထဲရောက်သွားတယ် အောက်မေ့ရတာပဲ…ကပ်ထားတာကလဲ ပါးစပ်က ပေါက်ထွက်လာပါအုံးမယ်… ကောင်းလား…ချိုမာ…. ကောင်းသေးပါဘူး နော်…..သူ့သနားလို့ ဥစ္စာ….. တဟဲဟဲနှင့် ရယ်ရင်း မောင်မောင် ဆောင့်ပေးနေပြီ…။ ပထမအဆင့် တဝက်လောက်သာထုတ်၍ သွင်းချီထုတ်ချီ လုပ်ပေနေသည်..။ လီးကြီးအား ဒစ်ဖျားနားအထိ ရောက်အောင်ထုတ်၍ အဆုံးထိ ဖြေးဖြေးချင်း သွင်းသည်..။ အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားများက လီးကြီး ထွက်လာတိုင်း စူထွက်လာသကဲ့သို့ အဝင်တွင် လီးနဲ့အတူ ပြန်ပါသွားသည်..။ တစွပ်စွပ် အသံလေးများပင် ထွက်လာသည်..။ မောင်မောင်သည် ချိုမာ၏ ပေါင်ကို ထောင်၍ ပုခုံးပေါ်သို့ ခြေနှစ်ချောင်း တင်ကာ တစ်တီတူးထောင် ပုံစံနှင့် လုပ်ကြည့်သည်..။ တစ်ချက်…နှစ်ချက်….။ အိုး…ဟိုးဟိုး…..ကိုမောင် မရဘူး…၊ ဒီပုံက အထဲမှာ အောင့်အောင့်လာတယ်…၊ ရိုးရိုးပဲ လုပ်ပါ… ခုနပုံကိုတောင်မှ ကြိပ်မှိတ်ခံနေရတာ…ကိုမောင်ရဲ့.. မှားသွားသည်..။
ရိုးရိုးခြေဆင်းပြီးပဲ လုပ်လိုက်သည်..။ ချိုမာမှာ တွေ့ကြုံမှု မရှိသေးသောကြောင့် လက်နှစ်ဖက်နှင့် မောင်မောင့်ခါးကို ဖက်ထားသည်မှ လွဲ၍ ဘာမှ တုန့်ပြန်မှု မပေးတတ်….။ မောင်မောင်က သည်တစ်ခါ ကြမ်းလိုက် သာသာလေးဆောင့်လိုက် နှင့် ဆောင့်ချက်တွေ များလာသည်..။ မောင်မောင်ပြီးချင်ပြီ..။ ခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်ချက်များ ဆယ်ချက်ခန့် ဆောင့်ပေးလိုက်ရာ မပီမသ ငြီးသံများနှင့် ချိုမာ့ တစ်ကိုယ်လုံး ကျင်တက်သွားကာ ပြီးသွားသကဲ့သို့ မောင်မောင်မှာလည်း ပြီးသွားသည်..။ ဘယ်လိုနေလည်း….ဟင်…. သိပ်ကောင်းတာပဲ….ကိုမောင်ရယ်…. အသံညှင်းညှင်းလေးနှင့် မောင်မောင့်နား နားကပ်ပြောလိုက်သည်..။ ပြင်ပလောကကြီးတစ်ခုလုံး မိုးစက်ကျသံများနှင့် လွှမ်းမိုးနေသလို မောင်မောင်နား၌ သိပ်ကောင်းတာပဲ ဟူသော ချိုမာ့ တုံ့ပြန်သံလေးကသာ စိုးမိုးနေသည်……ပြီးပါပြီ။